Jaaliyada Midowday ee Julbaland, Jwxo-shiil in uu Jujuubo Jahawareer Ahaa – Rasaasa News
Jaaliyada Midowday ee Julbaland, Jwxo-shiil in uu Jujuubo Jahawareer Ahaa
Apr 19, 2010 dagaalo, Jubaland, Somaliya
Jaaliyada Midowday ee Jubaland ayaa 19 iyo toban sano, ka dib dagaaladii sokeeye ee somaliya, waxay ka abuurantay dalalka reer galbeedka iyo South Afrika Jaaliyada midaysan oo awood badan ayaa hawlaheed bilowday badhtamihii sanadkii 2009.
Jaaliyada ayaa muujisay mudadii gaabnayd ee ay jirtay waxqabad dhab ah oo muuqda oo isu keenay Jaaliyaadka ka soo jeeda gabalada Jubooyinka.
Jaaliyadu waxaa kale oo ay isku xidhay siyaasiyiinta u dhalatay gabalka iyada oo siinaysa taageera buuxda siyaasiga ay markaasi isleeyihiin waxqabad muuqda ayuu u keeni karaa gabalada Jubooyinka.
Jaaliyada ayaa waxay dhawaan soo bandhigtay in ay qabandoonto shir balaadhan oo ay isugu iman doonaa Jaaliyadaha u dhalashay gabalada Jubooyinka ee ka jira dalalka reer Yurub, magaalada Brimingham ee dhul waynaha Ingriiska.
Arintaa qaban qaabada shirka Jaaliyada oo la filayo in uu dhaco May 1, 2010, waxaa iyana dhinacooda arimo xagal daacin ah ka waday xubno jiriqaa ah, oo isku dayayey in ay jaraan xadhigii la guntaba.
Rasaas.com waxay todbaadkii hore idiin soo bandhigtay in dadkaas ay horboodayaan duqay hawl gab ah oo iyagu ku jira xiligii la odhan jiray [cun ku cayili mayside, dheh lagaa dhaysan maayee], balse jecel in ay dadka afduubaan.
Dadkaas hawlgabka ah oo iyagu ku nool guryaha la yidhaahdo [pension homes], ahna dad u baahan sheeko laakiin dhaafay xiligii ay wax qaban lahaayeen, ayaa waxay had iyo goor ku jiraan arimo ka dhan danta guud ee ummada.
Dadkaas oo aanu taariikh nololeedkooda mid mid u soo qaadan doono todobaadyada soo socda si aanu ugu iftiimino Jaaliyada gabalada Jubooyinka, si ay uga digtoonaadaan.
*Maalintii shalay ahayd ayey qabteen shir ay 10 ruux isugu timid, kaas oo ay doonayeen in ay ku minja xaabiyaan shirka Jaaliyada ee qabsoomidoona bisha May 1, 2010. Shirka ay qabteen ayey aad ugu ceeboobeen, waxaana uusan nafar uga imanin dadka ku abtirsada gabalada Jubooyinka. Sida ay sheegayaan dad goob joog ahaa, kolkii ay dad iman waayeen qolkii ay kireeyeen ayey dadka telefoon u dirayeen iyaga oo leh maxaad shirka u iman waydeen, wali waan joognaaye noo imaada.
Dadkan la colaatamaya Jaaliyada midowday ee Jubaland, ayaa iyagu ah dad daba dhoon u ah Jwxo-shiil, oo isagu jidiinka mariyey halgankii Ogadeeniya ee ay wada Jabhada ONLF.
Waxaa la yaab leh, waxa ay kooxda Jwxo-shiil, ka rabto habsami u shaqaynta Jaaliyada Jubaland ee iyadu doonaysa in ay wax u qabto dadka dhibaataysan ee degan gabalada Jubooyinka.
Waxaa loo malaynayaa in ay tahay uun maadaama dadku isku isir yahay in ay kooxda Jwxo-shiil, is leeyihiin hadii ay dhismaan Jaaliyado ku abtirsada magaca Absame, meesha ayaad ka baxaysaan, kolka waa in aan ka hortagnaa.
Kooxda Jwxo-shiil, waxay ka soo horjeedaa kuli Jaaliyadaha asalkoodu yahay Absame; sida Jaaliyadaha Somali Ogaden Community Association, Somali Ethiopian Diaspora Form, Horn Afric charity, Jaaliyada dawlada Degaanka Somalida, Ogaden Women Association, Ogaden Youth Network iyo qaar kale oo badan.
Dadka dabada ka riixaya is-hortaaga Jaaliyada Midowday ee Jubland, oo aan ahayn dad degaan ahaan ka soo jeeda gabalada Jubooyinka, ayaanu idin soo siin doonaa kuwa ay yihiin iyo wax ku kaliyafa in ay Jublan wax qabsan waydo.
Jabhada Somali Galbeed Waa Halyeeyo ka Soo Baxay Shacabka
Beeni Raad ma Leh; Qorahey.com iyo Qaaxana Beentoodaada Qaraxday